Sarkaal kasoo goostay Xarakada Al-shabaab oo isku dhiibay ciidanka Galmudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sarkaal kasoo goostay Xarakada Al-shabaab oo isku dhiibay ciidanka Galmudug
Waxaa maanta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu soo bandhigay sarkaal ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab, kadib markii uu isku soo dhiibay maamulka Galmudug.
Sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Maxamed Daahir Shuuriye oo saxaafadda kula hadlay saldhiga booliska Gaalkacyo ee maamulka Galmudug ayaa sheegay in si iskiis ah uu iskaga soo baxay Xarakada Al-shabaab ee ka arimiya degmada Xarar-dheere, islamarkaana uu isku soo dhiibay ciidanka ammaanka Galmudug ee ku sugan Gaalkacyo.
Maxamed Daahir Shuuriye ayaa sidoo kale sheegay in si nabad-gelyo ah uu iskugu soo dhiibay ciidamada ammaanka ee Galmudug ayna soo dhaweeyeen, wuxuuna tilmaamay inuu ka tanasulay ka mid ahaanshiyaha Al-shabaab.
Wuxuu sidoo kale tilmaamay in wixii hadda ka danbeeya uu maamulka Galmudug iyo ciidamada nabad-sugidda maamulkaasi uu kala shaqayn doono sidii Xarakada Al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaas.
Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa horey u shaaciyay inay cafinayaan islamarkaana ay soo dhaweynayaan saraakiisha iyo askarta u dagaalanta Al-shabaab, hadii ay isa soo dhiibaan, iyadoona ay ahmiyad gaar ah ay weliba siin doonaan shaqsigii si iskiis ah Al-shabaab uga soo baxa.